नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराई र एमाले–माओवादी केन्द्र गठबन्धनबाट नारायणकाजी श्रेष्ठले उम्मेदवारी दार्ता गराएपछि गोरखा २ अहिले चर्चाको शीखरमा छ। दुई प्रमुख नेताको प्रतिस्पर्धाले गर्दा सम्भवतः गोरखा २ यो निर्वाचनको सबैभन्दा ‘हट जोन’ हुनेछ। आइतबार उम्मेदवारी दर्ता गर्न गोरखा पुगेका भट्टराई र श्रेष्ठसँग गोरखामा नेपालखबरका प्रदेश प्रतिनिधि प्रशन्न पोखरेलले गरेको वार्ताको सम्पादित अंशः
यसपाली गठबन्धन नै बनाएर चुनावी मैदानमा आउनु भयो नि? बाबुराम भट्टराईः कांग्रेस र कम्युनिष्टको दुई वटा कित्ता लामो समयदेखि लड्दै, भिड्दै आए। गोरखामा पनि त्यही अवस्था थियो। अब लड्ने, भिड्नेभन्दा पनि सम्वृद्धिको बाटोमा जानुपर्छ। त्यसका निम्ति एकआपसमा मिलेर जानुपर्छ भन्ने सोचाइका साथ गोरखामा नयाँ प्रयोगको सुरुवात गरेका हौं।
नारायणकाजी श्रेष्ठः नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टी एकता गर्ने निर्णय गरेर अगाडि बढेका शक्ति हुन्। सिंगो देशमा एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी बन्दैछ। गोरखामा पनि समाजवादको मोडल देखाउने काम गर्दैछौं। निर्वाचनमा तालमेलसँगै समाजवादसम्म पुग्नका लागि पनि हामीले गठबन्धन निर्माण गरेका हौँ।
तपाईंको उम्मेदवारी किन? भट्टराईः यो सामान्य चुनाव होइन। संविधानसभाबाट बनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानपछिको पहिलो आम निर्वाचन हो। यसले नै आगामी चार वर्ष देशको राजनीतिको मागदर्शन गर्छ। अब नेपाली राजनीतिका एजेण्डा फेरिएका छन्। हिजोको लडाइँ पूरानो व्यवस्थाविरुद्ध थियो। लोकतन्त्र स्थापनाका लागि थियो। तर, अबको एजेण्डा भनेको विकास र सम्वृद्धि हो। हामी जुनसुकै पार्टीबाट उम्मेदवार बनेपछि मुख्य एजेण्डा विकास र सम्वृद्धि नै हो। त्यसका निम्ति राजनीतिक स्थायित्व चाहिन्छ। अहिलेको जुन निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुप छ, त्यसले एउटा दललाई मात्रै पूर्ण बहुमत दिने संभावना कम छ। यस्तो अवस्थामा विचार मिल्ने शक्तिहरु आपसमा मिलेर गए राजनीतिक स्थिरता हुने र देशलाई विकास, सम्वृद्धिको दिशामा लिएर जाने संभावना रहन्छ। कांग्रेससँग तालमेल गरेर गोरखाबाट हामीले नयाँ उदाहरण पेश गरेका छौं।
श्रेष्ठः स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन संविधान कार्यान्वयनको मुख्य कार्यभार हो। मेरो उम्मेदवारी वास्तवमा संविधान कार्यान्वयनमार्फत् नेपाललाई स्वाधिन, सम्वृद्ध र सामाजिक न्यायसहितको राष्ट्र बनाउनका लागि हो। गोरखा जिल्लाले मुख्यतः नेपाल एकीकरणको भूमिका खेलेको थियो। हाम्रो उम्मेदवारी र विजयले राष्ट्रलाई पूर्ण स्वाधिन बनाइराख्न संकल्प गर्दछ र त्यसमा योगदान पु¥याउनेछ।
अर्कोतिर गोरखाले जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ। मेरो उम्मेदवारी संविधान कार्यान्वयनमार्फत् ती उपलब्धी जनताको तहसम्म पु¥याउने, देशलाई सामाजिक न्यायसहितको सम्वृद्ध नेपाल बनाउने र समाजवादको आधार खडा गर्नका लागि हो। जसरी गोरखाले पहिले एकिकरण, क्रान्तिकारी परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो, अब समाजवादको आधार निर्माणमा र अन्ततः समाजवादको महत्वपूर्ण मोडल निर्माणमा पनि भूमिका खेल्नेछ। मेरो जितसँगै गोरखाले यो भूमिका निर्वाह गर्नेछ।
गोरखा २ नै किन रोज्नुभयो? भट्टराईः गोरखा एउटा सामान्य जिल्ला मात्र होइन। पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा राज्यनिर्माणको अभियान सुरु गरेको ठाउँ हो। राणाको विरुद्ध सबैभन्दा पहिले विद्रोहको शंखघोष गरेर लोकतान्त्रिक चेतनाको सुरुवात गर्ने लखन थापामगर पनि गोर्खाली नै थिए। म यहीँ जन्मँे, यही हुर्केँ र यहीँ संघर्ष गरेँ। विकास र सम्वृद्धिका जुन नयाँ कुरा हामीले गरेका छौं, त्यसको अगुवाइ पनि गोरखाले गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। देशभरिको अपेक्षा पनि यही छ। गोर्खाबाट मेरो उम्मेदवारी त्यही अपेक्षा पुरा गर्नका लागि हो। गोरखाली जनताले हामीलाई अत्याधिक मतले जिताउँछन् र विकास, सम्वृद्धिको नेतृत्व गर्ने अवसर दिन्छन्। गोरखाले विकासका निम्ति अग्र भूमिका खेल्छ। जुन ठाउँमा म जन्मेँ, हुर्कें, सम्पूर्ण राजनीतिक लगानी गरेँ, त्यो ठाउँप्रति भावनात्मक लगाव हुनु स्वभाविक हो। हामीले विकासको मोडल निर्माण गर्न एउटा नर्सरी बनाउने कोसिस गरेका छौँ। आफू जन्मे, हुर्केको, जानेको, जनताले हिजोदेखि समर्थन गरेर अघि सारेको ठाउँमा लड्दा त्यो काम गर्न संभव हुन्छ भनेर नै म गोरखा २ बाट उठेको हुँ।
श्रेष्ठः गोरखा लामो समयदेखि क्रान्तिकारी वामपन्थीहरुको किल्ला हो। पछिल्लो स्थानीय तहको चुनावमा केही समस्याहरु देखाप¥यो। तर अहिले हामी वामपन्थीहरु एकतावद्ध भएर आएका छौं। हाम्रो जत्तिको उच्च मनोवल कसैको छैन। वैचारिक लाइन पनि हामी जत्तिको प्रष्ट कसैको छैन। हामी वामपन्थी एकता र प्रष्ट राजनीतिक लाइन सहित आएका छौं। संगठन, वामपन्थी एकता, उच्च मनोवल र प्रष्ट राजनीतिक लाइनका आधारमा हाम्रो विजय सुनिश्चित छ।
जित्ने आधार के हो? भट्टराईः हामीले नेपाली कांग्रेससँग तालमेल गरेका छौँ। अब संयुक्त चुनावी अभियान चलाउँछौं। र, शानदार ढंगले जित्छौं।
श्रेष्ठः मेरा मुख्य प्रतिद्धन्द्वीको कुनै वैचारिक लाइन र प्रष्ट विचार छैन। उहाँ खिचडी विचार लिएर मैदानमा आउनु भएको छ। यस हिसावलेपनि हाम्रो जीत अरु सहज भएको छ। हामीले भनेका छौँ, गोरखा जस्तो वामपन्थीहरुको किल्लामा यस पटकको विजय सामान्य खालको विजय हुनुहुँदैन। गोरखामात्र होइन, देशभरि नै वामपन्थी गठबन्धनको विजय सहज र सुनिश्चित छ।
प्रकाशित ६ कार्त्तिक २0७४ , सोमवार | 2017-10-23 02:30:37